Ho hitarina ny tsena anatiny sy ivelany mikasika ny asa tanana : ONG C For C - Madagascar Informations
23 septembre 2016 30 septembre 2016 Madagascar Informations Aucun commentaire
Na dia efa fantatr’izao tontolo izao aza ny asa tanana vita malagasy dia mbola tsy ampy ny lalam-barotra ahafahana manaparitaka izany any ivelany. Manatanteraka varavarana misokatra eto amin’ny tranoben’ny varotra androany ny ONG C for C sy ny Tetik’asa Matoy.
Ity tetik’asa ity dia miompana amin’ny famadihana ny tahona varim-bazaha ho lasa asa tanana ilaina amin’ny fiainana an-davan’andro. Ny ONG Cfor C miaraka amin’ny tetik’asa matoy arak’izany no manome ny fiofanana ho an’ireo tantsaha : « Tanjona ny hanome traik’efa ho an’ny tantsaha mba ahafahana mampitombo ny fidiram-bola ».
Mitsangana amin’izao fotoana izao ny koperativa mpanodina ny varim-bazaha ho akora fototra ho lasa taozavatra ilaina amin’ny fiainana an-davanandro mba ahafahana manitatra ny tsena atiny sy ivelany.
Ireo vehivavy indrindra indrindra no kendrena manokana mba hahafehy ny ny kalitao, ny fitantanana ,ary ny fahaizana informatique.
← Mahantra ny olona – Antoko Marina
New York – Signature du Traité sur le commerce des armes classiques et rencontres bilatérales →